Arsenal oo doonaysa inay u dhaqaaqdo soo xero gelinta xiddig ka tirsan kooxda Manchester United – Gool FM
Arsenal oo doonaysa inay u dhaqaaqdo soo xero gelinta xiddig ka tirsan kooxda Manchester United
(London) 16 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay rajaynayso inay soo qaadato Antonio Valencia oo ay ku sii hayso horyaalka Premier League, marka uu ka tago Manchester United dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Xiddiga xulka qaranka Ecuador ayaa la filayaa inuu ka tago garoonka Old Trafford suuqa xagaaga markaasoo uu heshiiskiisu dhacayo ama dhammaanayo, waxaana uu soo gabagabayn karaa heshiis waqti dheer oo uu ku joogay kooxda Man Utd taasoo uu in kabadan 300 oo kulan u saftay tartammada oo dhan.
Laacibkan qibradda leh ee Valencia ayaa kula guuleystay Man United labo horyaalka Premier League, Europa League iyo FA Cup, waxaana inuu beeca xorta ah noqon doono dhammaadka xilli ciyaareedkan ay la micno tahay in tiro ka mid ah kooxaha sare uu bartilmaameed u noqdo.
Sida ay warinayso Jariiradda Metro, Arsenal waa mid ah ka mid ah kooxaha waa weyn ee doonaya inay u dhaqaaqaan soo xero gelinta xiddigan, kaasoo ku takhasusay inuu booska daafaca dambeedka middig ka ciyaaro sanadihii u dambeeyay.
Aabaha dhalay Valencia ayaa sidoo kale u muuqda inuu xaqiijin doono in West Ham, Inter Milan iyo koox kale oo aan la magacaabi karin oo ka ciyaara horyaalka Shiinaha ay doonayaan inay la saxiixdaan wiilkiisa.
Weeraryahanka Kooxda Liverpool, Sadio Mane oo shaki laga galinayo kulanka Berri galab ee Premier League
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Madrid Vs Celta Vigo